चाहिएको: टेक्नोलोजिस्ट Extraordinaire | Martech Zone
चाहिएको: टेक्नोलोजिस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनेयर
बुधवार, मई 30, 2007 Douglas Karr
मेरो राम्रो मित्र र सल्लाहकार, क्रिस बगगट, आफ्नो कम्पनीको लागि एक CTO को खोजीमा छ, कम्पेन्डियम सफ्टवेयर। यो स्टार्टअप भएको कारण क्रिसले एक आक्रामक प्याकेज सँगै राख्ने विचार गरिरहेछन् जुन स्टारलाई चाहिने आकर्षण गर्दछ। क्रिस र अली बिक्रीको कम्पेन्डियमको लागि उत्कृष्ट दृष्टिकोण छ, उनीहरूसँग फन्डिंग छ, र अब तिनीहरू ब्रास ट्या्याकमा जान र प्रणाली निर्माण गर्न चाहन्छन्।
प्रणालीले के गर्छ भन्ने बारे म अधिक कुरा गर्न सक्दिन, केवल यो ब्लगि atमा क्रान्तिकारी दृश्य हो जसले व्यापार परिणामहरू खडा गर्नेछ, विशेष गरी कर्पोरेट ब्लगहरूको लागि। यस दर्शनलाई वास्तविकतामा सार्न क्रिसलाई आफ्नो औंलाहरूमा टेलेन्ट भएको कसैको आवश्यकता छ। आदर्श रूपमा, यस व्यक्तिको सुरुआत, सामाजिक नेटवर्कि,, ब्लगिंग, खोजी, र विकास र वास्तुकलामा एक उद्यम स्तर अनुप्रयोग निर्माण गर्न आवश्यक पृष्ठभूमि हुनुपर्छ। अवश्य पनि, विकासमा एक उत्कृष्ट पृष्ठभूमि एक हुनुपर्दछ - उत्तम प्रविधि (तपाइँको छनौट) को उपयोग।
यदि तपाईं प्रतिभाशाली हुनुहुन्छ भने, यो तपाईंको टिकट हुन सक्छ। क्रिसले देश मा इंक's०० को सब भन्दा द्रुत बृद्धि गर्ने कम्पनीहरूको ExactTarget बढ्न मद्दत गर्यो। ऊ वास्तविक सम्झौता हो। अधिक जानकारीको लागि र तपाईंको रिजुम सबमिट गर्न क्रिस मार्फत सम्पर्क गर्नुहोस् कम्पेन्डियमको वेबसाइट। कुनै ठेकेदार चाहँदैनथे - यो एकल, पूर्ण-समय स्थिति हो।
के जिम्मेवार मार्केटिंग प्रतिफल छ?
माइक्रोसफ्ट फोटोसिन्थ टेक्नोलोजीहरू
मई 30, 2007 मा 11: 23 PM
हे डग। यो उत्साहजनक लाग्दछ र वास्तवमा तपाईंको गल्ली माथि।
म हैरान छु कि तपाईं यस अवसरमा उफ्रिनुहुन्न किनकि तपाईंसँग क्रिससँग राम्रो काम गर्ने र व्यक्तिगत सम्बन्ध छ।
यस्तो देखिन्छ कि विगतका केही महिनाहरू स्टार्टअपहरूको लागि अधिग्रहणको लागि उत्तम समय भएको छ, त्यसैले दक्षता भएका जो कोही यसै छिटो उफ्रिनु पर्छ ... जसलाई थाहा छ, कम्प्यान्डियम प्रमुख प्लेयरबाट अर्को खरीद बन्न सक्छ ...
केवल स्टक विकल्पहरूको बारेमा सोच्नुहोस् 🙂
मई 31, 2007 मा 8: 11 एएम
क्रिस एक स्ट्यान्ड अप केटा हो र ऊ आफैंले गरेको प्रयासको लागि एक्क्सटार्टबाट प्रतिभा खेल्ने जोखिम कहिले लिन सक्दैन।
र मलाई लाग्छ क्रिसलाई वास्तवमै कसैलाई कडा पेशेवर प्रोग्रामिंग पृष्ठभूमि भएको हुनुपर्छ। यद्यपि मैले व्यावसायिक रूपमा विकास गरेको छु, म उत्पादन प्रबन्धकको अधिक धेरै छु, रणनीतिहरू र ग्राहकको आवश्यकताहरू पहिचान गर्दै, त्यसपछि तिनीहरूलाई विकास टोलीहरूको लागि आवश्यकतामा परिणत गर्दै। त्यो मेरो कोठा हो।
मँ यो मेरो ब्लगमा पोष्ट गर्दैछु, यद्यपि मेरो नेटवर्कमा पुग्न सकियोस्। क्रिसलाई यसमा सब भन्दा राम्रोको आवश्यक छ र म कम्पेन्डियमको सफलताको साथ मद्दत गर्न सबै गर्न चाहन्छु! यदि तपाईंलाई कसैको बारेमा थाहा छ भने यस जानकारीलाई पास गर्नुहोस्।
मई 31, 2007 मा 7: 36 एएम
डग पोस्टका लागि धन्यबाद। दुर्भाग्यवस, मेरो एक्स्ट्याक्टटार्जेटको प्रतिस्पर्धाले डगलाई मेरो पहुँचबाट टाढा राख्यो।
यसका लागि सही व्यक्तिसँग नेतृत्व, दर्शन छ र यो कम्पनीलाई सफल बनाउन धेरै मेहनत गर्दछ। हामीलाई थाहा छ हामी सफ्टवेयरले के गर्न चाहन्छौं… हामीसँग ग्राहकहरू छन्… हामी सँगै आउने र हाम्रो टेक्नोलोजी प्रयासहरूको नेतृत्व गर्न सही टीमको सदस्य चाहिन्छ।
जुन २,, २०१ बिहान :1:२२ बिहान
हे त्यहाँ डग - मलाई पनि पूर्ण विश्वास छ कि क्रिस र उनका प्रयासहरुका साथसाथै सही व्यक्तिले कम्पेन्डियम सफ्टवेयरलाई क्रिसको लागि अर्को वास्तविक सफलता बनाउनेछ।
जंगली चराहरू असीमित, Inc.
वाह! अर्को स्थानीय प्रतिभाशाली उद्यमी मेरो साइट भ्रमण गर्दै! तपाईं मध्ये कसैलाई वा जंगली चरा असीमितको नसोधेको सुन्न नसक्ने मानिसहरूका लागि तिनीहरूको आदर्श वाक्य भनेको "हामीले गर्ने सबै कामको पछाडि मानिस र प्रकृतिलाई सँगै ल्याउनु हो।" तिनीहरू एक अविश्वसनीय कम्पनी हो।
र ती अविश्वसनीय बजारहरू हुन्। मैले विरलै कम्पनीमा देखेको छु जसले उनीहरूका ग्राहकहरूसँग सञ्चार गर्न र उनीहरूसँग बाँडिंगमा यस्तो ठूलो काम गर्दछ। (मेरो हजुरबुबा एक गर्व ग्राहक हो!)
मार्टी, द्वारा रोकिएकोमा धन्यवाद। कम्पेन्डियम ब्लगि ofको विकास हो! जबकि अन्य व्यक्तिहरू प्लेटफर्महरू र प्लगइनहरू निर्माण गर्दैछन्, क्रिसको कम्पनीले एक समाधान निर्माण गर्दै छ जुन खोज र सामग्रीलाई सँगै ल्याउँदछ! म यो ड्राइभ परीक्षण गर्न प्रतीक्षा गर्न सक्दिन!